I-2016 yeWebhusayithi yoyilo lweNdlela yokuCinga ngaphambi kokuDala indawo yakho | Martech Zone
Sibonile iinkampani ezininzi zihamba zicocekile, amava alula kubasebenzisi bewebhusayithi. Nokuba ungumyili, umphuhlisi, okanye uthanda iwebhusayithi, ungafunda into ngokujonga indlela abenza ngayo. Zilungiselele ukuphefumlelwa!
Ukushiya ngasemva, kwiintsuku ezinqabileyo zewebhu, ezazigungxula ii-gifs ezibengezelayo, imivalo yoopopayi, amaqhosha, ii-icon kunye nokududa kwe-hamsters, oopopayi namhlanje kuthetha ukudala ukusebenzisana, ukuphendula isenzo esonyusa ukubaliswa kwamabali kunye nokubonelela ngamava omsebenzisi osisityebi.
Imizekelo yoopopayi abatyebileyo kubandakanya ukulayisha oopopayi, ukuhambahamba kunye neemenyu, iiopopayi zokuhambisa phezulu, iigalari kunye nemiboniso yesilayidi, oopopayi abanyakazayo, ukuskrola, kunye noopopayi bangasemva kunye nevidiyo. Jonga le ndawo ukusuka eBeagle, iqonga lolawulo lwesindululo:
Ukutyeba oopopayi kunokubonakala kunxibelelwano oluncinci. Umzekelo, kwi-LinkedIn, umsebenzisi unokuhamba ngaphezulu kwekhadi kwimenyu yokungena kwezinto ezifihlakeleyo, emva koko ukhethe ukutsiba ibali okanye ukuthatha ezinye izinto.
Iimpawu ze-GIF ziye (ngovuyo?) Zivukile, kwaye zinokusetyenziselwa iinjongo ezininzi ezahlukeneyo, kubandakanya umdlalo ohlekisayo, imiboniso, kunye nokuhombisa nje.
material Design, ulwimi loyilo oluphuhliswe nguGoogle, luxhomekeke kwizinto zoyilo ezisekwe kuprinta-typography, iigridi, isithuba, isikali, umbala, kunye nokusetyenziswa kwemifanekiso-kunye neempendulo zoopopayi kunye notshintsho, ukugoba, kunye neziphumo ezinzulu njengokukhanyisa nezithunzi ukubonelela ngamava omsebenzisi okwenyani, abandakanyekayo, kunye nonxibelelwano.
Uyilo lwezixhobo lusebenzisa isithunzi, intshukumo, kunye nobunzulu ukubonelela ngobuhle obucocekileyo, banamhlanje kugxilwe ekuphuculeni i-UX ngaphandle kweentsimbi ezininzi kunye neempempe.
Eminye imizekelo yoyilo lwezinto ezibonakalayo ibandakanya umfanekiso onqamlezileyo, ubungakanani obukhulu bokuchwetheza, kunye nendawo emhlophe ethandwayo.
Ngelixa uyilo lwezixhobo lubonelela ngendlela enye kumxholo wobuncinci, uyilo olucwangcisiweyo luhlala lukhetho oluqhelekileyo kubathandi bemigca ecocekileyo. Oko kukuthi, uyilo olucwangcisiweyo luhlala lubonwa njengolwenyani, oluchanekileyo, kunye nolwazelelo lwedijithali.
Ngokusekwe kwimigaqo yendawo emhlophe, imiphetho echaziweyo, imibala edlamkileyo, kunye ne-2D- okanye "iflethi" -imifanekiso eqingqiweyo, uyilo olucwangcisiweyo lubonelela ngesitayile esiguquguqukayo esihlala sisebenzisa ubuchwephetsha njenge-line iconography kunye nezithunzi ezinde.
Eyona nto isetyenzisiweyo xa unemimandla emibini ngokulinganayo yokunyusa, okanye ufuna ukubonelela ngomxholo ecaleni kweefoto okanye imithombo yeendaba, izikrini ezahluliweyo yindlela entsha yokubonelela ngamava omsebenzisi kunye nawomeleleyo.
Ngokuvumela abasebenzisi ukuba bakhethe umxholo wabo kunye namava, unokwenza uhlobo lwamava olwaziyo olutsalela iindwendwe ukuba zingene.
Ngokudibanisa ii-chrome bumpers kunye nokuhonjiswa kweemoto zakudala, "i-chrome" ibhekisa kwizikhongozeli zewebhusayithi-iimenyu, iintloko, iinyawo kunye nemida-ezibandakanya umxholo ongaphakathi.
Oku kunokuba yinto ephazamisayo, kwaye iinkampani ezininzi zikhetha ukukhululeka kwizikhongozeli kwaye zenze iindlela ezicocekileyo, ezinqamlezileyo ngaphandle kwemida, iintloko, okanye iinyawo.
"Ngasentla kwesibaya" yijoggon yamaphephandaba kwisiqingatha esiphezulu sephepha eliphambili lephephandaba. Kuba amaphephandaba ahlala esongelwe kwaye abekwe kwiibhokisi nakwimiboniso, owona mxholo unyanzelisayo uya ngaphezulu kwesibaya ukuze ubanike elona thuba libalaseleyo lokufumana umfundi (kunye nesipaji sabo).
Uyilo lwewebhusayithi kudala lusebenzisa umbono wesibaya kumgaqo wokuba ukuskrola kwakunzima. Kodwa kutshanje, imifanekiso egcwele isikrini kunye nomxholo ubulisa umsebenzisi kwaye ukhuthaze ukuskrola ukuze utyhile umxholo owongezelelweyo, onzulu.
Ividiyo kunokuba yindlela elungileyo yokubamba iindwendwe, kwaye ihlala isebenza ngakumbi kunokubonakalayo okanye isicatshulwa. Ukukhulula iividiyo ezinjengezo zisetyenziswe yiApple kwiApple Watch yindlela eyahlukileyo yokuseta ithoni kunye nokutsala iindwendwe.
Cofa uze ubone DK New MediaIvidiyo kwiphepha labo lasekhaya
Xa kuziwa kuyilo lwewebhu, uninzi lwezinto ezithile ziya kuchazwa ngumzi mveliso wakho, niche, kwimakethi ekujoliswe kuyo, kunye nomxholo. Uyilo lwakho luya kuxhomekeka kwinto iindwendwe eziphendula kuyo kwaye yintoni eyenza eyona mvakalelo kumyalezo wakho. Kodwa ngale mizila isesandleni, uyakuba nayo yonke into oyifunayo ukwenza iwebhusayithi enyanzelayo eyenzayo le nto uyifunayo, kwaye oko kubonisa ukuba uyazi ukuhlala kunye namaxesha.